Al-Shabaab oo soo bandhigay Magacyada & Sawirrada raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhiga Manda Bay - Awdinle Online
Al-Shabaab oo soo bandhigay Magacyada & Sawirrada raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhiga Manda Bay
Al-Shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin internet-ka waxaa ay ku baahiseen muuqaallada, Sawirada & magacyada iyo raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee deegaanka Manda Bay ee dalka Kenya.
Weerakaas ayuaa waxaa uu dhacay 5-tii Janaayo sanadkii 2020, waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho & dhaawac ah oo uu kujiro Sarkaal ka tirsan Ciidamada Mareykanka.
Hoos Ka Akhriso Magacyada raggii fuliyay weerarkii Manda Bay ee dalka Kenya.
1: Moulana Faruq Moulana (Ahmed Al-Muhajir), hoggaamiyihii kooxda una dhashay dalka Yeman.
2: Abubakar Al-Muhajir, oo u dhashay dalka Tanzania.
3 : Cali Maxamed Cali (Qudama Al-Muhajir), oo kasoo jeeda dalka Ethiopia, kana soo jeeda qabiilka Burj, balse ku dhahsay kuna barbaaray magaalada Nairobi.
4 : Cabdilwali Muhammad Ibrahim (Moallim Omar) iyo , oo kasoo jeeda gobollada Baay iyo Bakool, islamarkaana ahaa taliye ku-xigeenkii kooxda weerarka fulisay.
5 : Aadam Imaan Yuusuf (Abdulkariim Alansari), oo kasoo jeeda gobollada Baay iyo Bakool.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale baahisay codka Hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmad Cumar Abu Cubayda oo uu kaga hadlay weerarkaas. Lama shaacin taariikhda la duubay codkaas.
Previous articleXasan Sheekh oo weerar afka ah ku qaaday Madaxda Dowladda Soomaaliya
Next articleSoomaali banaanbax ka dhigtay Mareykanka & hal Arrin oo ay dalbanayaan
Akhriso:- Galmudug oo Magacaawday Guddi ka kooban 13 Xubnood
Dowladda Soomaaliya oo Muqdisho keentay askar & shacab ku dhaawacmay dagaalkii Beled-Xaawo